Gịnị Bụ Aha Chineke? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maltese Maya Mixe Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Venda Vietnamese Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Onye ọ bụla nọ n’ezinụlọ anyị nwere aha. Ụfọdụ anụmanụ anyị na ha bi n’ụlọ nwedịrị aha! Ebe ọ dị otú ahụ, o kwesịkwara ekwesị na Chineke ga-enwe aha nke ya. E nwere ọtụtụ aha e turu Chineke na Baịbụl. Ụfọdụ n’ime ha bụ Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, Ọkaakaa Onyenwe Anyị, na Onye Kere Ihe Niile. N’agbanyeghị ọtụtụ aha ndị a e turu ya, Chineke nwere otu ezigbo aha.—Gụọ Aịzaya 42:8.
Ebe e dere aha Chineke n’ọtụtụ Baịbụl bụ n’Abụ Ọma 83:18. Dị ka ihe atụ, na Baịbụl Nsọ—Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ, amaokwu ahụ kwuru, sị: “Gị onwe gị, onye aha gị bụ Jehova, ọ bụ naanị gị bụ Onye Kasị Elu n’ụwa niile.”
Gịnị mere anyị ji kwesị ịna-akpọ Chineke aha ya?
Chineke chọrọ ka anyị na-akpọ ya aha ya. Anyị na-akpọ ndị anyị hụrụ n’anya, dị ka ezigbo ndị enyi anyị, aha ha mgbe anyị na ha na-ekwurịta okwu, nke ka nke, ma ọ bụrụ na ha chọrọ ka anyị na-akpọ ha aha ha. Ọ̀ bụzi Chineke ka anyị na-agaghị akpọ aha ya mgbe anyị na-agwa ya okwu. Ihe ọzọkwa bụ na Jizọs Kraịst chọrọ ka anyị na-akpọ Chineke aha ya.—Gụọ Matiu 6:9; Jọn 17:26.
Ma, ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị na Chineke bụrụ enyi, ihe anyị ga-amata abụghị naanị aha ya, anyị ga-amatakwa ihe ndị ọzọ gbasara ya. Dị ka ihe atụ, anyị kwesịrị ịmata azịza nke ajụjụ ndị dị ka, Olee ụdị onye Chineke bụ? Anyị na ya ò nwere ike ịdị ná mma? Ị ga-amata azịza nke ajụjụ ndị a ma ị gụọ Baịbụl.